Funeral for Father of Nilar Thein – ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မနီလာသိန်း၏ဖခင်ဈာပန ကျင်းပ | MoeMaKa Burmese News & Media
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မနီလာသိန်း၏ဖခင်ဈာပန ကျင်းပ
ယမန်နေ့ မနက် ၁၂ နာရီက ၈၈ မျုိးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မနီလာသိန်းရဲ့ ဖခင် ဦးသိန်း (ခ) ကန့်စိန်ဘန် (အသက် ၈၁ နှစ်၊ မတ် ၂၅၊ ၂၀၁၂ မှာ ကွယ်လွန်)
ရဲ့ ဈာပနကို ရေဝေးသုသန်မှာ မီးသဂြိုဟ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။
ဈာပနကို ၈၈ မျုိးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအင်အားစု အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများ ၃၀၀ ခန့်
ကွယ်လွန်သူကို ရည်စူးပြီး မတ် ၃၁၊ စနေနေ့ နံနက် ၇ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ အထိ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး တရားနာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အမှတ် ၁၀၁၊ ၁၁၀၊ ၄ လွှာ၊ ၅၁ လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် နေအိမ်သို့ ကြွရောက်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
3 Responses to Funeral for Father of Nilar Thein – ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မနီလာသိန်း၏ဖခင်ဈာပန ကျင်းပ
Ba Chit on March 28, 2012 at 4:18 pm
please be consoled….Ma Ni Lar Thein.
Even . ” Myat Swar Pha Yar ‘ lived till aged 80.
We do understand ‘ loss of close family member ‘ .
He lived long . Ma Ni Lar Thein. He did .
U ThiHaTintSwe on March 29, 2012 at 10:55 am
Our Burma Democratic Concern(B.D.C) is very sorry on death of- Father-U Thein of Jimmy & Nilar Thein,88-generation student’s leaders.
tunhla on March 30, 2012 at 9:39 pm